Ku Noqo Macluumaadka Shaqada ee Loo-shaqeeyayaasha Ganacsiga Yar Yar ah ee ay Saamaysay COVID-19 - Office of Economic Development | seattle.gov
Waaxda Amniga Shaqada (ESD) waxay haysaa macluumaad loogu talagalay inay ka caawiso loo shaqeeyayaasha iyo shaqaalahooda markay bilaabaan inay ku laabtaan goobta shaqada inta lagu guda jiro marxaladda ka soo kabashada cudurka faafa ee COVID-19. Xiriirka ugu weyn ee macluumaadka ESD waa https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19 (Ingiriis oo keliya). Macluumaadkan si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa sidaa darteed dib u eeg marrar badan.
Su'aalaha loo shaqeeyaha, sida kuwa hoos ku taxan, waxaa looga jawaabaa goobta shaqada ee loo shaqeeyaha: https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-employer-information
Waxaan soo bandhigay dalab ah in uu shaqada ku laabto shaqaalaha asagana uu diiday inuu soo laabto. Maxaan sameeyaa?
Shakhsiyaadka guud ahaan ma haystaan ikhtiyaar ay ku kala doortaan helitaanka faa'iidooyinka shaqo la'aanta ama dalab u soo celinta shaqada ku habboon loo shaqeeyaha. Shakhsiyaadka waa inay lahaadaan sabab wanaagsan oo ay u aqbalaan shaqada ku habboon si ay u sii wadaan qaadashada macaashka shaqo la aanta ama Caawinta Shaqala'aanta Aafada sida uu dhigayo Sharciga CARES ee federaalka.
Sababaha wanaagsan ee sababi kara in shaqaaluhu diido shaqada oo uu sii wado aruurinta shaqo la’aanta waxaa ka mid ah:
Inaad ku xanuunsantahay COVID-19 ama aad daryeesho xubin reerka ka tirsan oo la xanuunsan COVID-19.
Inaad guriga joogto oo aad daryeesho ilmo yar sababta oo ah iskuulkoodii ama xannaanada ayaa xiran.
Booska ay ku soo noqonayaan si weyn ayaa loo bedelay, si weyn ayaa loo dhimayaa mushaharkooda, ama goobta shaqada loo raray masaafo aad u fog.
Marka shaqaale uu fayl gareeyo codsi cusub ama dib loo furo dheefta shaqo la'aanta, waa lagu soo ogeysiin doonaa oo waxaad ka doodi kartaa sheegashada shaqaalaha ee ah in lagu tuuray iyadoon wax khalad ah ee iyaga u gaar ah. Waxaad rafcaan ka qaadan kartaa go'aanka Waaxda Amniga Shaqada si aad u siiso waxtarrada shaqa la'aanta shaqaalaha.
Sideen ku wargaliyaa qof diiday inuu ku noqdo shaqada oo sii wado aruurinta shaqo la’aanta?
Qof kasta oo fayl garaya cabashooyin toddobaadle ah waa inuu si run ah u caddeeyaa inay heleen dalab ku soo noqday shaqada. Markay ogeysiiyaan ESD inay heleen dalab ah inay shaqada ku laabtaan, waxaan la xiriiri doonaa loo shaqeeyahayaga oo qayb ka ah raadinta xaqiiqda si loo go'aamiyo u qalmidda faa'iidada shaqo la'aanta. Loo-shaqeeye ahaan, waxaad sidoo kale si firfircoon ugu wargalin kartaa ESD adoo ka warbixinaya arrimaha diidmada shaqada ee akaawnkaaga eServices, ama adoo u diraya macluumaadka xarunta sheegashada.
Waa maxay cawaaqibta ka dhalan karta shakhsiyaadka aan si run ah u soo sheegin markay awoodi waayaan oo ay heli karaan shaqada, u diidaan shaqo la siiyo, ama hela dakhli markay soo xareeyaan sheegashooyinka toddobaadlaha ah?
Shakhsiyaadka waa inay si run ah u soo sheegaan goorta aysan awoodin ama u heli karin shaqada, haddii shaqo la siiyay iyo wax kasbasho ah markii ay xereynayaan sheegashada toddobaadlaha ah. Jebinta xeerarka, sida ula kac ah u soo sheegida shaqada saxda ah iyo dakhliga soo gala ama sababta kala goynta, waxay ku dambayn kartaa in loo diido dheefaha, iyo sidoo kale lacag-bixin dheeraad ah, iyo ganaaxyo ESD ay aruurin doonto. Ficilada noocan oo kale ah xitaa waxay ku dambayn karaan xukun dambi.
Khayaanada ayaa si ula kac ah u haysa macluumaadka ku saabsan sheegashada. Shakhsiyaadka diida dalab shaqo oo ku guuldareysta inay soo sheegaan in ay diideen shaqo ku saabsan sheegashadooda toddobaadlaha ah waa loo diidi karaa dheefaha oo waxaa lagu qiimeeyaa ganaax dheeri ah oo musuqmaasuq ah.
Ma jiraa farqi u dhexeeya shaqo ka fadhiisin ku meel gaar ah iyo furitaan?
Shaqo-joojinta ku meelgaarka ah ee shaqaalaha ku meelgaarka ah waxay u dhacdaa shaqo-dhimista darteed. Loo shaqeeyuhu ma aha inuu dib u noqdo shaqaalahan.
Furloughsare nooc shaqo ka fadhiisasho ku meel gaar ah oo ka koobnaan karta joojinta shaqada oo dhan ama la dhimay saacadaha shaqada waqti cayiman. Tusaale ahaan, yareyn hal maalin usbuuci oo sanadki ah.
Ka waran kharashaadka waxtarka ah?
Xeerarka cusub ee xaaladaha deg-degga ah, xannibaadaha ku-meel-gaarka ah ee la xiriira COVID-19infection ee meesha loo yaqaan 'businesstaks sababtoo ah waxaad xiri doontaa ama si xun uga shaqeyn kartaa duruufaha qallafsan. Youmayrequestrelief oo ah lacagaha waxtarka. Shaqaaluhu waa inay aqbalaan aqbalaadda shaqada.
Ka waran ciqaabta lacageed ee ganacsatada?
Ganaax lacageed ayaa laga dhaafi karaa loo-shaqeeyeyaasha faylka soo gudbiya warbixinnada cashuurta xilli dambe, oo cashuur bixiya xilli dambe, ama aan ka jawaabin codsiyada macluumaadka wakhti xaadir ah sababta oo ah COVID-19. Hadaad ubaahantahay caawimaad dheeri ah, wac Linda Helenberg 206-628-6988 ama Lhelenberg@seattlejobsinit.com.
Kheyraadka dheeraadka ah ee Loo shaqeeyayaasha Ganacsiga Yar yar
Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha ee Seattle wuxuu lashaqeeyaa iskaashatadayada gobolka, iyo dowlada dhexe si looga caawiyo dadka shaqeeya iyo ganacsatada yar yar ee uu saameeyay faafitaanka COVID-19.
Su'aalaha guud, fadlan u dir emailka OED@seattle.gov ama wac 206-684-8090
Markaad soo wacdid waxaad la xiriiri kartaa qof nool ama cod cod ah. Hadaad gaarto farriinta codka, fadlan noo sheeg:
Kaalmo noocee ah ayaad u baahan tahay
Liiska macluumaadka ganacsatada yar yar ee Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha ee Seattle
Wejiga Labaad ee Dib Loo Furey Qalabka
Kafeega ku meel gaarka ah, Meelaha Ganacsiga iyo Ogolaashaha Lacagta
Caawinaad Farsamo oo SBA oo bilaash ah oo loogu talagalay PPP iyo EIDL amaahda